Jonga ikamva leNtengiso yeVidiyo | Martech Zone
Jonga ikamva leNtengiso yeVidiyo
NgoMgqibelo, Novemba 15, 2008 NgeCawa, ngo-Novemba 25, 2012 Douglas Karr
IYunivesithi yaseStanford ikhuphe ZunavisionItekhnoloji enomdla evumela umthengisi ukuba ongeze ngokudibeneyo imifanekiso okanye ividiyo kwividiyo kwenye - nokuba ikhamera ihamba. Itekhnoloji enomdla kodwa andiqinisekanga ukuba iyakwamkelwa ngokubanzi inikezwe indalo yayo. Mhlawumbi ukuba azenzi ukuba iintengiso zicace gca.
Isithembiso esinye solu hlobo lwetekhnoloji inokuba yeyamashishini eshishini lokwenza imveliso kwimveliso yeposi. Oko kunokubonelela ngolondolozo olukhulu kumzi-bhanyabhanya ngokunganyanzelekanga kwaye babonise amathuba entengiso ngaphambi kwexesha. Kananjalo, ayizukufuna izixhobo zentengiso ezibonakalayo.
Ukuba ujonga nge-RSS kwaye awuyiboni ividiyo, cofa umzekelo we Itekhnoloji yokufaka ividiyo eStanford Zunavision.
tags: Itekhnoloji yeStanfordintengiso yevidiyo
Yeka ukuBhaka, Masityalele amaThuba
I-Autotarget: Injini yokuThengisa ngokuziphatha ye-imeyile
Nov 15, 2008 ngo-2:51 AM
Yinto entle kakhulu leyo Doug. Kuthekani ukuba abathengisi abanakubeka kuphela "ibhilibhodi" yabo ngaphakathi kwevidiyo, kodwa kunye ne-hyperlink yendawo yevidiyo kwi-URL? Kukho iqhinga leYouTube lokwenza imali ukuba indawo yokucofa ikwazile ukubonwa ngumsebenzisi ngandlela ithile.
I-FYI, ndicinga ukuba ikhonkco lakho labantu be-RSS lifumana iphepha lakho le-404.
Nov 16, 2008 ngo-10:04 PM
Ividiyo entsha kunye netekhnoloji yentengiso efana nale iyonwabisa kakhulu kum ngokwembono yokuvelisa. Andichukunyiswa kakhulu ziisayithi ezizama ukuphinda-phinda iYouTube kwaye ziyisebenzise kwindawo ethile efana neevidiyo, okanye iividiyo zamanyala, okanye nantoni na onayo. Qhubeka nokutyhala imvulophu ngetekhnoloji entsha kwaye ndonwabile.
Nov 17, 2008 ngo-3:06 AM
enkosi ngenqaku elikhulu